TorLaser - Mena, Blue, Violet, Maitso Laser Pointer | Laser - TorLaser.com
Tongasoa eto TorLaser!
TorLaser dia tetikasa teraka tamin'ny 2009 noho ny fitiavan'ny mpankafy marobe ho an'ny tontolon'ny laser.
Niainga avy amin'ny tsy tokony hanolotra tranonkala manam-pahaizana manokana amin'ny laser manondro ny fahefana tena izy amin'ny vidiny mora vidy mba ahafahan'ny mpankafy manana vokatra matihanina matihanina amin'ny vidiny tsara indrindra.
Ireo lasantsy mena no voalohany niseho nandritra ny telopolo taona mahery, ka dia efa lafo sy mihena be ny vidiny. Ny halavam-pandrefesana teboka mena manomboka ny 630nm ka hatramin'ny 670nm. Kely kokoa noho ny maitso izy ireo, fa raha ny heriny hodorana kosa avo kokoa. Ny lasary mena dia mety amin'ny karazana fampiasana: mahafinaritra, fanandramana, fampisehoana…
Ireo kitrera maintso maintso no ampiasaina ankehitriny, satria ny maizina maitso dia avo in-6 avo kokoa noho ny mena. Ny halavam-pandrefesana teboka maitso manomboka amin'ny 500nm ka hatramin'ny 550nm, ny 532nm dia natsangana ho fahita fahita indrindra. Ireo lasantsy maitso dia mety amin'ny karazana fampiasana: mahafinaritra, astronomia, sary, fanandramana, fampisehoana, signage, sary fahitana, fampitaovana, fihazana, habakabaka…
Blue lan violet laser pointers niseho vao haingana, no tena tsy manam-paharoa sy sarotra mahita. Ny blues dia mitambatra be ny hazavana be dia be ny anana miaraka amin'ny hery handoro ny mena. Ny halavam-pandrefesana teboka manga dia 445nm ary 405nm ny violets. Laser manga sy violet dia mety amin'ny karazana fampiasana rehetra: mahafinaritra, sary, fanandramana, fampisehoana ary na dia blues ho an'ny astronomy aza!
NY ZARAKO ANTSIKA
Hany tena herinaratra
Kit Kit Feno
Fandresena Taona 2
Tena sary sy horonan-tsary
Best Price Azo antoka
Raha manana fanontaniana ianao dia anontanio.
Ho hainay haingana izany.
Talavera de la Reina - Toledo - Espaina